कार्तिक ७ गते आईतबार ,राम्रो-नराम्रो कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - Sawal Nepal
काठमाडौं सवाल नेपाल २०७८ कार्तिक ६, १८:०४
तपाईको दिन प्रतिकुलतामय रहनेछ । मन चिन्ताले व्यग्र रहनेछ । पेसा वा व्यवसायिक स्थलमा सहकर्मचारीको र उच्च अधिकारीको व्यवहार नकारात्मक रहनेछ । सन्तानको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ ।